"Experience" - inhlanganisela esiphelele induduzo engambi eqolo
Amaholide e Sharm el-Sheikh akuyona kakhulu kuthambekele umndeni iholide ethule, it afanelekile kakhulu intsha. Lokhu, uchaza nightlife sasivumela ephapheme the resort.
Eminyakeni yamuva, Sharm el-Sheikh kubhekwa phakathi abaseRussia endaweni ethandwa kakhulu. Kusuke kufanele kube njalo. Awukwazi kuphela ukuphumula ukhululekile, kodwa futhi uye diving, iya ku-uhambo futhi nje bazijabulise. Nokho, phakathi izivakashi butholakala hhayi kuphela intsha, kodwa futhi imibhangqwana nezingane kanye nabantu abadala, abeza ziqhamuka Europe neRussia.
Amaholide e Sharm el-Sheikh, ezihlobene zamanani aphansi, kodwa ukuhlala ngempela ukhululekile. The yokungcebeleka kungathi izingalo ezingamakhulu amabili lwamahhotela amazinga ehlukene intengo. ingqalasizinda wabo uhlukile ezingeni European service. Ngakho ukuze uhlale yimpumelelo, abaningi bakhetha ukuhlala amahhotela amane noma aphambili etholakala eduze kolwandle kanye siqu lolwandle yayo yangasese. Basuke yibhange ukunikeza inkonzo ukhululekile, ukudla izinga, namanye amasevisi amaningi ukuthi awatholakali amahhotela nge omncane "stardom". Phakathi kwabo, muva nje wathatha aphambili "Okuhlangenwe Nakho Kwabantu Kirosayz Land Park", etholakala kule ndawo Naami Bay.
Leli hhotela yakhiwa kuleli ngonyaka ka-2004. Igama lakhe wangaphambili - Three Amakhona Kiroseiz kuyona. "Okuhlangenwe Nakho Kwabantu" - ehhotela zikanokusho, okuyinto ezimbili nje amabhishi yangasese: anesihlabathi coral. Ngo-2015, unyaka leli zwe kwenziwa ukulungiswa ezinkulu. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo resort of Sharm el-Sheikh itholakala amakhilomitha amathathu kude. Isikhumulo sezindiza kuyinto imizuzu eyishumi nanhlanu kude.
Ihhotela kuyinto endaweni enkulu amamitha enamandla eyizinkulungwane ezingamakhulu amathathu square, landscaped ngokugcwele. ingqalasizinda Its kuhlanganisa ukushintshana ehhovisi lwemali, i-izitolo ezimbalwa, ihhovisi yezokwelapha, izinwele salon, amakamelo amane umhlangano, ubusuku nemini reception edeskini, cinema, internet cafe, nelondolo.
"Okuhlangenwe Nakho Kwabantu" - kuyinto eziyinkimbinkimbi ehhotela, ogama insimu ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili - i-Ingxenye yokuqala, lapho kukhona ezimbili, ezintathu futhi esinezitezi ezine izakhiwo, kanye yesibili, okuyinto iyisonto ukhululekile olulodwa storey Bungalows futhi Chalets phakathi kwemithi. yokuhlala Ubude ahlinzekwa amakamelo anamakhulu asixhenxe, kuhlanganise ejwayelekile, Deluxe, aphakeme kanye nomndeni. Kukhona futhi ezindlini amabili nanhlanu, esisogwini Umugqa wokuqala kusukela olwandle. Zonke anemisila ifenisha ukhululekile, air-conditioning, plasma TV, balcony yangasese noma masimu esibheke epaki amanzi.
Ihhotela isebenza welithi "Zonke womanyano" futhi "Super nke okufakayo". Ukudla inikezwe zokudlela ezintathu eziyinhloko - "UFaro", "Atrium" futhi "Sultan" lezitsha. "Okuhlangenwe Nakho Kwabantu" - a eziyinkimbinkimbi, ogama indawo izakhiwo eziyishumi nane, lapho izivakashi abakwazi kuphela ukudla, adle, kodwa futhi ukuze uthole iziphuzo. Lokhu, ngaphezu eziyisisekelo, zokudlela ezine, abasebenza pre-yokubhuka, nemishayo, kuhlanganise nesigaxa sushi, ikhefi kanye Pizzeria. Esikhathini imenyu - hhayi kuphela Arabic, kodwa futhi cuisine European.
Njengoba "Experience" - kuyihhotela, ingxenye okuyinto ngokwanele ibanga kusuka ulwandle, ngokuba lula izivakashi ezivela umzimba omkhulu iphelela kabili ngosuku kuya ebhishi Shuttle khulula. Ukuze izivakashi izambulela, emphemeni izihlalo kanye amathawula ogwini mahhala ebukhoneni isongo.
Ihhotela Ubuye amakilabhu ezimbili: mini - Trixie Kids Club, kanye Trixie Sho, osemusha futhi eminyakeni eyishumi nambili. Kukhona a inkundla yokudlala kanye igumbi cwaningo, ichibi engajulile. Abazali ungathola uhlaka egumbini izingane futhi esihlalweni esiphakeme e-yokudlela, ukusebenzisa umzanyana abakhuluma isiRashiya (kwendibilishi).
"Okuhlangenwe Nakho Kwabantu Kirosayz" idume aqua yayo eziyinkimbinkimbi, okubandakanya indawo yokubhukuda, sauna, ikamelo umusi, Jacuzzi futhi i-ozone zokugeza kanye nezindawo for massage futhi aziphumulele. On endaweni yayo esebenza ukuqina Health Club Sheri Nile isikhungo gym yesimanje, ukuqina studio, lapho aerobics amakilasi.
Kukhona futhi ezimbili ongaphandle okubhukuda nge-slide, ensimini ukuze ukudlala ibhola lezinyawo, ibhola lomphebezo, imicibisholo, basketball ne-volleyball, kanye ezimbili siqu diving isikhungo salo. amakhilomitha amahlanu kusukela ehhotela wavula yegalofu.
Ngesikhathi sebehlezi ogwini zabahamba uba anhlobonhlobo imisebenzi amanzi - catamarans, Ukushushuluza amanzi, Awe-Parasailing, bagel, ubhanana, njll "Okuhlangenwe Nakho Kwabantu" - kuyihhotela ukuthi has a lot of lezimanga for izivakashi, ezifana usuku lokuzalwa, for honeymooners kanye namakhasimende avamile.
Kulabo abakhetha ukuya eholidini e Uhambo, ezifana uhambo lezindela eSt Catherine National Park, eStraits of Tiran, intaba kaMose Coloured Canyon.
Ngokusho amaRashiya amaningi, "Experience" - inhlanganisela esiphelele induduzo izindleko engabizi. Lona evamile "emihlanu" ne ngamanani aphansi. Insimu ehhotela iningi baziswa amaphuzu aphezulu. Okufana nokubuyekeza umsebenzisi futhi wathandwa abasebenzi ukuthi okhuluma izilimi eziningi. Kwenzeka isimanga, lesi ehhotela akuyona izivakashi eziningi abakhuluma isiRashiya. Amagumbi futhi ukudla ukufanisa ezingeni eyinkimbinkimbi ehhotela Xperience Kiroseiz Ipaki Land. Iningi abaseRussia babeyiqembu iholide ujabule futhi uhlose ukubuyela lapha futhi.
PGS Amahhotela Umhlaba Palace 5 *: incazelo, izithombe, izibuyekezo
Rope ezemidlalo: incazelo, ezihlukahlukene, ukusetshenziswa